Shirka Kismaayo oo galay wejigii sadexaad ( Dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 6, 2013 3:47 b 0
Kismaayo, April, 6-Shirka maamul goboleedka loogu dhisayo deegaanadda Jubbaland oo dhowaan lagu ansixiyey Dastuurka KMG ah ee maamulkaasi ayaa xiligan galay wejigiisii sadexaad.
Wejiga sadexaad ee shirka ayaa lagu dooranayaa M/weynaha maamulkaasi Jubbaland iyo soo xulista xildhibaanadda Baarlamaanka ee Jubbaland.
Hilowle Aadan Maxamuud oo kamid ah gudiga qaban qaabinaya dhismaha maamulka Jubbaland horana usoo noqday Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaankii Dawladii KMG ahaa ayaa ? isagoo ku sugan Kismaayo Radio Daljir uga waramay halka uu hada marayo shirku.
Halkan ka dhegayso Waraysiga Hilowle Aadan Maxamuud?
Wuxuu sheegay in shirku uu hada si habsami leh u socdo islamarkaana aysan jirin wax kala qaybsanaan ah hase ahaatee wuxuu sheegay inay jiraan dad aan deegaanka ahayn oo si xun wax u sheegaya.
Masuulkan ka mid ah qaban qaabiyayaasha shirka Jubbaland ayaa ku baaqay in Dawlada Federalku taageerto rabitaanka shacabka Jubbaland islamar ahaantaana ku dhaqanto Dastuurka dalka sida uu hadalka u dhigay.
Shirka maamul u samaynta Jubbaland oo mudo lix bilood ku dhow ka soconayey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbadda Hoose ayaa xiligan maraya meel gaba gabo ah, mudadii uu shirku soocdey waxaa soo wajahay qabado kala duwan oo ka imaanayey dhinacyo badan hase ahaatee uu intooda badan kasoo gudbey.
Barnaamijka Dhibanaha, Xuquuqda caruurta wadooyinka lagu tuuro marka ay dhashaan